Mmiri mmiri ozuzo ikpeazụ adịghị edozi nsogbu ọkọchị | Netwọk Mgbasa Ozi
Mmiri ozuzo nke zoro na Spain na izu ndị gara aga arụwo ọrụ iji nwetaghachi ogo nke ọdọ mmiri niile na Peninsula. Otú ọ dị, ha adịghịdị nso siri ike iji belata nsogbu nke ụkọ mmiri ozuzo.
Chọrọ ịma ka ọkwa nke ọdọ mmiri si arị elu na ntụnyere na ihe anyị kwesịrị ịnwe?
1 Oke unwu
2 Echekwa ụkọ mmiri
3 Ojiji nke mmiri na mmiri ozuzo
Oké ọkọchị na Spain ahughi kemgbe 1995 ebe ọdọ mmiri niile dị na Spain ruru 34%. Afọ 2017 a ga-emechi na ndoputa by 38,15%, mgbe izu atọ gachara. Iju mmiri ndị a enyeworo aka ichekwa mmiri dị na ha, ma ha adịghị ebelata oke ọkọchị nke Spain nwere.
Mkpokọta mmiri echekwara na Spain taa bụ hectometres cubic 21.391. Ego a dị anya site na nkezi nke afọ iri gara aga, nke guzo na hectometres cubic 31.691.
Ọnọdụ nke ọdọ mmiri ahụ adịchaghị ala kemgbe 1995, mgbe ha ruru ikike 34,71%. Ọnọdụ oge a na-adọrọ mmasị karịsịa na ụfọdụ efere dị na mgbago ugwu ugwu, dị ka Duero, nke dị na 31,38% (ọkwa a na-ahụbeghị kemgbe afọ 30) ma ọ bụ Segura, nke dị na 14,11 , XNUMX%, nke kachasị echegbu onwe ya.
N'ihi mmiri ozuzo n'izu ndị a, ha abawanyela, ọkachasị n'ụfọdụ akụkọ dị n'akụkụ ugwu nke peninshula nke nọ n'ọnọdụ dị oke egwu. Fọdụ dịka Eastern Cantabrian, nke dị na 90,41%, Western Cantabrian, nke dị na 61,20% na Miño-Sil, na 44,22%.
Echekwa ụkọ mmiri
Ihe data nke Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and Environment mara taa, nke ikpeazu nke 2017, na-ekpughe na bekee nwere oke ụkọ mmiri ka na-aga n'ihu bụ nke Segura, nke bụ na 14,11%; nke Júcar, 25%; ndagwurugwu Andalusia, na 30,58%; Duero, na 31,38%; na Guadalquivir, na 31,69%.
Osimiri Segura bụ nke kachasị na-enye nsogbu na ọkwa adịghị ala karịa afọ iri, mgbe ha ruru 14,26%. Ogo Júcar adịkwala ezigbo ala, ọ bụ ezie na ha nọkwa na ọkọchị nke 2007, na-eru 20,02%.
N'ihe dị n'okpuru 50%, Miño-Sil basins (44,22%), Galicia Costa (46,64), Duero (31,38), Tajo (37,40), Guadiana ga-emechi afọ. (44,04), Guadalete (38,82), Guadalquivir (31,69), ndagwurugwu Mediterranean nke Andalusia (30,58), Ebro (48,91) na ọkwa dị n’ime nke Catalonia (45,79).
Dika anyi maara, oke ugwu adighi emetuta ugwu ugwu nke Spain, ebe obu na onodu ya di elu: Eastern Cantabrian, nke g’eme ka afo a di n’iru na 90,41; Ọdịda anyanwụ Cantabrian (61,20); ọdọ mmiri nke Basque Country (80,95), na ndị nke Tinto Odiel na Piedras (na 69).
Ọ bụrụ na anyị nyochaa nchịkọta mmiri niile dị na Spain, anyị ga-ahụ pasent nke 38,15% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, nke mechiri afọ ahụ na 51,1%. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, kwa afọ, oké ọkọchị na-apụtawanye ìhè ma na-adịwanye ize ndụ, ebe ọ bụ na ala ịkpa na-arịwanye elu.
Ojiji nke mmiri na mmiri ozuzo
E nwere ụzọ abụọ e si arụ ọrụ ndị a na-enye n’ọdọ mmiri: ndị a na-eji eri ihe (ndị a na-eweta maka ọnụ ọgụgụ mmadụ) na ndị na-eweta ike hydroelectric (site na nsụda mmiri).
Ojiji eji eri ihe Ha dị 33,3% site na ọnụ ọgụgụ nke afọ gara aga nke 58,1%.
N'aka nke ọzọ, ọdọ mmiri eji maka ọgbọ nke ike hydroelectric dị na 49%, mgbe nkezi nke afọ ise gara aga bụ 62,2%.
Mmiri ozuzo kachasị ọhụrụ emetụtawo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Spain niile na-enyere aka ịbawanye ọkwa nke ọdọ mmiri, mana dịka amụma ndị ahụ, ha agaghị ezuru iji belata nsogbu ọkọchị, nke ga-abawanye n'oge ọkọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Mmiri mmiri ozuzo ikpeazụ anaghị edozi nsogbu mmiri ozuzo
Enwela mbibi nke oke mmiri ozuzo Bruno kpatara